Nọmba Hyperlink ekwentị na Anchor Tags
Tuesday, August 24, 2010 Tuzdee, Machị 31, 2015 Douglas Karr
Ndị enyi m ga - enweta nke a, ebe ọ bụ na anaghị m aza ekwentị m hey mana hey… nke a bụ maka inye aka gị ụlọ ọrụ, ọ bụghị nke m! Na nnukwu anya na iPhones, Droids na ndị ọzọ smartphones, ọ bụ n'ezie na oge na ị na-amalite optimizing gị na saịtị maka ojiji na a mobile nchọgharị. N’oge na-adịghị anya anyị rụpụtara ahụmịhe onye ọrụ dị iche iche dị iche iche maka onye ahịa, na-ewepụta ngwa mkpanaka nke ngwa weebụ anyị wuru ha wee bulie ya maka iji ya na iPhone na Droid.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ gị enweghị ike ịkwụ ụgwọ mmezigharị saịtị gị niile maka ojiji ekwentị, enwere otu ihe dị mfe ị nwere ike ime ozugbo: hyperlink nọmba ekwentị gị nke mere na ndị ọrụ mkpanaka nwere ike ịpị ha naanị wee malite ịkpọ oku ekwentị. The syntax bụ nnọọ mfe:
A na-ahụkarị arịlịka mkpado ya na njikọ weebụ jiri URL na uru, njikọ email na-eji mailtoSyntax nke nọmba ekwentị bụ naanị waya. M nwalere uru na ma na-enweghị parentheses, oge na dashes na ihe niile na-egosi na-arụ ọrụ na ma iPhone na Droid. Agbanyeghị, m ka ga-amachi nọmba ekwentị ahụ n'ọnụ ọgụgụ pere mpe na uru href.
Chee echiche banyere ole mkpọka ụgbọ ala ị nwere ike ịchekwa ndị mmadụ ka ha wee ghara ịnwa iburu n'isi ma ọ bụ dee nọmba ahụ!
Tags: otu telkoodu HTML maka akara ekwentịhtml njikọ ekwentịhtml nọmba ekwentị njikọHTML mkpado ekwentịhtml njikọ ekwentịnọmba ekwentị hyperlinknọmba ekwentị hyperlinkiphone nọmba ekwentị njikọnjikọ nọmba ekwentịmobile nchọgharị njikọmobile njikọakara nọmbaekwentị njikọ htmlnọmba ekwentị njikọnọmba ekwentị njikọ htmlnkpado ekwentịakara ekwentịmkpado akara ekwentịmkpado ekwentị mkpanaakaakara akara ekwentị mkpanaakaKpido ekwentị mkpanaakaakara nọmba ekwentịakara akara ekwentịtel njikọ html
Odida: Isi ihe na-aga nke ọma
Ezigbo Doug! Mee atụmatụ ịmalite iji nke ahụ na saịtị ndị ahịa m niile. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na m biputere nke a na blọọgụ m? N'ezie inye gị edemede zuru oke. Dị jụụ! 😎
ndị na -ede ede
Sep 6, 2010 na 11:37 PM
Yabụ enwere ihe kpatara Ọ B toGH to itinye ọnụọgụ, oge, ma ọ bụ akara ngosi na nọmba ekwentị? Na nọmba ekwentị html ọ na-eme dị ka mkpado aha? Enwere uru SEO bara na ịme aha aha n'ime koodu href?
Sep 7, 2010 na 7: 08 AM
@edeckers Rkpụrụ RFC3966 egosighi na ọ na-akwado nrụrụ mana ọ na-akwado ụda nke nhọrọ na akara ndị ọzọ maka ọkpụkpọ mba, ndọtị, wdg.
Banyere SEO, Ahụghị m ihe kpatara ya! Ikekwe aha azụmahịa + “nọmba ekwentị” nwere ike ịbụ ụzọ dị mma isi mejuputa ya!
Na Imewe Houselọ
Ndewo, nke ahụ dị mma mana m nwara nke a na Firefox nyere m ozi njehie jọrọ njọ na-asị na ọ maghị etu esi agụ njikọ ahụ. Nye m, ọ baghị uru maka njehie ọjọọ dị njọ mgbe mmadụ pịa njikọ ahụ na desktọọpụ naanị ka ekwentị mkpanaaka nwee ike ịnweta njikọ ahụ. “Long-pịa” na nọmba ekwentị na android na ọ na-akpaghị aka na-agba mbọ na-akpọ a ọnụ ọgụgụ na agbanyeghị. A na m emehie? Enwere ọrụ dị gburugburu?
Nov 26, 2011 na 9:02 PM
O doro anya na onye ọrụ mkpanaka, Na .lọ.
Aug 28, 2013 na 2:46 PM
Nwere ike izere nke ahụ mgbe niile site na nchọpụta nchọgharị. Tinye ya na div nke zoro maka ihe nchọgharị na-enweghị mkpanaka / nnukwu.
Daalụ maka onye na-ezo aka na post Doug :)
Jun 14, 2011 na 11:20 AM
Daalụ nke ukwuu. dị mfe dị ka i kwuru, mana ịrụ ọrụ nke ọma. Nwere ike ịga n'ihu na ụzọ abụọ ma mee ka ọ jikọta na akara ngosi ma mepụta aha na mkpado arịlịka iji gosipụta nọmba ekwentị gị yana ntuziaka ndị ọzọ maka ndị ọrụ na-atụgharị òké ha na akara ngosi ahụ. Daalụ ọzọ!
Sep 28, 2011 na 10: 35 AM
anyị nwekwara ike ịgbakwunye ederede na nọmba ekwentị hyperlink?
Sep 28, 2011 na 4:11 PM
Ekwenyere m na mgbanwe href na-enye ohere nọmba… agbanyeghị, ị nwere ike itinye ederede ọ bụla ịchọrọ n'ime mkpirisi arịlịka ahụ n'onwe ya.
Mee 16, 2012 na 4: 48 PM
Nke a bụ oke aghụghọ! M ga-amalite itinye nke a na saịtị site ugbu a gaa n'ihu. Daalụ!
Jenụwarị 22, 2013 na 12:05 PM
Adịghị m 100% ijide n'aka (amaara m na nke a bụ mkparịta ụka mara mma nke mere na nke a nwere ike ghara ịlọghachi) mana ọ bụghị ọtụtụ smartphones ụbọchị ndị a na-akpaghị aka na-eme nke a ugbu a?
Jenụwarị 22, 2013 na 1:37 PM
@ facebook-502306174: disqus ọtụtụ na-eme, mana ọtụtụ na-edekwa nọmba ahụ ezighi ezi ọ gwụla ma ị kọwara ya.
Nov 19, 2013 na 9:21 AM
Dị nnọọ mfe mgbazi… ị kwuru na ị nwere ike ikwu na anyị “na-ihe niile, kama n'ezie nọmba IN the href uru”
Ekwenyesiri m ike na ị pụtara "debe ihe niile mana ọnụọgụgụ nke nọmba anyị nke uru href"
Ma ọ bụ ọzọ na ị ga-dị nnọọ ịpị a ụyọkọ akara edemede 🙂
Ọnye na-bụ DeanEthridge?
Jul 24, 2015 na 7: 37 AM
Daalụ Douglas, Gini bu Ogwe Egwuregwu Social Media ị na-eji? Blog gị na-adị oke mma ma ị nwere ọtụtụ ọdịnaya dị ukwuu. Ọ ga-amasị ijikọ na Google Plus. Daalụ ọzọ
Jul 24, 2015 na 11:04 PM
Daalụ Diin! Mgbe m nyochachara ọtụtụ ihe n'ụgbụ maka nnukwu azịza, m rutere Ekekọrịta. O nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ anyị na-anaghị eji - mana ọ na-agbanwe agbanwe!
Aug 14, 2015 na 3:49 PM
Amabeghị m site na kọlụm a, otu esi ziga nọmba ekwentị - na ekwentị, yabụ onye isi m nwere ike pịa ya kpọọ.
Aug 15, 2015 na 4:21 PM
Ndewo Dee, sọftụwia email gị ga-akwado HTML yana ike ịgbakwunye hyperlink anyị kọwara n'elu. Isiokwu a bụ ihe gbasara otu esi eme nke a na weebụsaịtị mkpanaka, ọ bụghị email.
Ọkt 5, 2015 na 4:11 PM
Ndewo Douglas, olee otu ọrụ a si arụ ọrụ maka ndị na-akpọ mba? Ọ dị gị ka ọ kacha mma iji akara mba ụwa (eg +44), ma ọ bụ koodu mpaghara mpaghara?
Ọkt 6, 2015 na 11:24 PM
Ikwu eziokwu, Ben, ekwere m na ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ. Ekwenyere m na ọtụtụ ndị na-akpọ mba ụwa na-eji koodu mpaghara mpaghara. Ndị aghụghọ Nigeria na-abata n'uche ozugbo. 🙂
Ọkt 20, 2015 na 7:32 PM
Ndewo, enwere ike iji hashtag dị ka hyperlink iji malite oku ekwentị? Anụrụ m ya kwuru ụbọchị gara aga mana ahụbeghị m ya. Daalụ!
Ọkt 20, 2015 na 10:51 PM
Ahụbeghị m nke a. Echere m na ị nwere ike ide ụdị ngwa mgbakwunye ma ọ bụ edemede, mana ọ bụghị ọrụ HTML.
Ọkt 23, 2015 na 12:46 AM
Kedu ka m ga - esi mepụta bọtịnụ “kpọọ ugbu a” na mmemme ịre ahịa email dị ka Microsoft Publisher? Ọzọkwa kedu ka m ga-esi tinye ya n'ime mailchimp?
Udochukwu Ekekwe (@IkpeazuOgo)
Nov 4, 2015 na 12:07 PM
Yabụ adịghị m mkpa ịgụnye - ma ọ bụ. n'etiti onu ogugu? Ọzọkwa, olee otu ị ga-esi tinye ndọtị ka hyperlink ga-akpọ ndọtị ahụ ozugbo?
Nov 4, 2015 na 4:17 PM
N'ime uru href, ịchọghị akara ọ bụla ma ọ bụ ntụpọ n'etiti ọnụọgụ. N'ime ederede arịlịka, ị nwere ike ide ihe ọ bụla.
Edemede ederede - nyere aka. Daalụ!
Mee 25, 2016 na 7: 02 AM
Nnukwu Nkeji edemede.
Aug 2, 2016 na 10:59 PM
Ndewo Douglas, Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta koodu a.
Sep 19, 2016 na 11: 05 AM
Nnukwu ego Doug! Daalụ. Isiokwu a dị mkpa karịa, afọ isii mgbe e mesịrị na ihe niile na-agagharị agagharị.
Ọ na-arụ ọrụ!! Daalụ Doug !! 😉
Nov 17, 2017 na 10:20 PM
Daalụ maka enyemaka gị!
Jenụwarị 2, 2019 na 4:06 PM
Nnọọ nkuzi! N'ezie, Na-amasị m akụkụ nke a "pịa ịkpọ wijetị" kama a "clickable nọmba ekwentị" mma. Mgbe m gbachara ngwa mgbakwunye Callback Tracker na saịtị m, ahụrụ m ọtụtụ nsonaazụ ndị ọzọ na ikike ịkpọ ndị m na-eduga, kama ịme ka ha kpọọ m. Onwe m, ahụrụ m na ọ dị mkpa na ọtụtụ saịtị. Nke a bụ njikọ ngwa mgbakwunye https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
Aug 6, 2019 na 1:08 PM
Dị jụụ, ekele maka ịkekọrịta!